Iyini ukuphathwa kwekhwalithi yephrojekthi?
Ukuphathwa kwekhwalithi yephrojekthi:Ukuphathwa kwekhwalithi yosuku lwamanje kanye nokuphathwa kwamabhizinisi kubalulekile. Bobabili bagcizelela ukuthembeka komthengi kanye nokuqiniseka okuyisisekelo ukuthi ikhwalithi ikhuthaza ukwethembeka kwabathengi. Umgomo oyinhloko ekuphathweni kwekhwalithi kuqinisekisa ukuthi lo msebenzi ukhuluma ngezinkinga okwakungenwe ekuqaleni ukuba ungahlangani lutho-lutho. Ekupheleni kosuku, ukuqinisekisa ikhwalithi, kufanele uxazulule izinkinga zomlingani wakho.
Ukuhlangana noma okudingekayo okudlulele, kunoma yikuphi, akuyona ingxenye ethile yokuphathwa kwekhwalithi yokusebenza. Njengoba kuboniswe yi-A Guide to the I-Project Management Body of Knowledge (I-PMBOK® Guide), ikhwalithi "izinga lapho ilungiselelo lezimfanelo ezingenasici liyanelisa izidingo."
Umqondisi wezinkampani kanye neqembu lokuphatha ngokuzibandakanya banesibopho esiyingqayizivele sokulungisa ikhwalithi kanye nebanga (isigaba noma isikhundla esikhethwe izinto noma iziphathimandla ezinesisetshenziswa esisebenzisekayo namanje izici ezikhethekile ezikhethekile). Lo msebenzi uqinisekisa ukuthi izifiso zekhwalithi zihlangene.
Lokhu kusho ukuthi kungabonakala futhi kunengqondo ukuba nekhwalithi, izinga lesilinganiso sesibili, kodwa akukaze kudingeke ukuba nento ephansi.
Ngasekuqaleni kokusebenza, izidingo zixazululwa nabalingani. Lezi zinto ezidingekayo ziphendukela ekusungulweni komsebenzi wokuzibandakanya. Kusukela ngaleso sikhathi phambili, umsebenzi womphathi womsebenzi ukuqinisekisa ukuthi umsebenzi usuphelile ngaphandle kwezinto ezengeziwe ezifakiwe. Ikhwalithi ayikho ngokunikeza iklayenti izinto ezengeziwe noma ukuqedela umsebenzi owengeziwe. Umcabango wezinto ezingeziwe uvame ukubukeka ngombono ongase ungalungile walokho uthemba ukuthi iklayenti idinga. Lezi zinto ezengeziwe zifaka isikhathi, izindleko ezicatshangwayo kanye nemiphumela ehlukene ukuze kube nomsebenzi kodwa ungavami ukuletha ukwethembeka komthengi.
Ukwandisa ukuphathwa kwekhwalithi kuqukethe izinqubo ezintathu eziphawulekayo:
Hlela ukuphathwa kwekhwalithi: ukuqaphela izidingo zekhwalithi nezingadi ze-venture kanye nento.
Yenza ukuqinisekiswa kwekhwalithi: ukuhlola okudingekayo kwekhwalithi kanye nemiphumela yokulawula ikhwalithi ukuze kuqinisekiswe ukuthi imodeli yekhwalithi efanelekayo isetshenziswa.
Ikhwalithi yokulawula: ukuhlola nokurekhoda imiphumela yezivivinyo zekhwalithi ukuhlola ukukhishwa nokuphakamisa izinguquko eziyisisekelo.
Incazelo yekhwalithi iyisisekelo sokuqonda lezi zinqubo ezintathu. Ukuze ube namandla okuveza ikhwalithi, kufanele ucaciswe ngokubaluleka kwemigomo elandelayo:
Ukuqinisekiswa: ukuqinisekiswa ukuthi into ihlangabezana nezixazululo ezidingekayo
Isiqinisekiso: ukuhambisana nezinto ezidingekayo
hle: Izinyathelo eziphindaphindiwe embuthanweni oqinile
hle: ukusondelana kwesilinganiso sokuhlonishwa kwangempela
Ukuvuselela: ububanzi bemiphumela eyanelisayo
Inqubo yokuhlela ukuphathwa kwekhwalithi yeProjekthi inquma izinkomba zokubheka izinto ezibonakalayo ukuze zisebenze futhi zithole indlela yokuzifeza. Inhloso ukwenza ukuphathwa kwekhwalithi kuhlele ukuthi yimiphi imibiko ehambisana nalokhu:
Indlela iqembu elizokwenza ngayo isu lekhwalithi
Indlela izinga lokuzibandakanya kanye nento lizoqinisekiswa phakathi kokusebenza
Impahla edingekayo ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi
Izenzo ezengeziwe zibalulekile ukwenza ilungiselelo lekhwalithi
Ukuhlukanisa lezi zinto kungase kudingeke ukuthi izibuyekezo zihlelwe ohlelweni lokuphatha noma ikhalenda, okugcizelela indlela eqhubekayo yokwenza amalungiselelo kanye namarekhodi okusebenza.
Loluhlelo, njengezingxenye ezehlukene ezenziwe phakathi nesigaba sokuhlela, luqanjwe ngumqondisi wokuzibandakanya ngemali evela kubalingani. Lapho ulungele ikhwalithi ekuthathweni kokubambisana ngemuva kwezinhlelo zekhwalithi zenkampani ezisungulwe. Ngethuba elilodwa lokuthi ilungiselelo lekhwalithi yebhizinisi alikho, iqembu eliqhamukayo kufanele lenze enye yezolimo. Iqembu elizimele lingase lidingeke lilungise indlela yamanje ukuze ihambisane kangcono nendlela yokusebenza.
Abaphathi beProjekthi Imibuzo Yokuxoxisana Izimpendulo
Izibalo zeBusiness Analyst for Beginners & Professional